Jimicsiyada lagu dhimayo culeyska: nashaadaad gubiya kalooriya fara badan | Ragga Stylish
Jimicsiyo miisaan lumis ah
Miisaanku wuu ka badan yahay sidii la rabay oo hadda waxaad u baahan tahay jimicsi wanaagsan si miisaanku kaaga yaraado? Is daji, adiga ma tihid kii ugu horreeyay ama kii ugu dambeeyay ee xaaladdaas gaara. Muhiimadu waa taas waxaa jira xal loogu talagalay kiiladaas dheeriga ah.
Fikradaha soo socda ayaa kaa caawin doona inaad gubto kalooriyaal badan si jirkaagu ugu noqdo sidii uu markii hore ahaa. Laakiin xusuusnow inay tahay inaad joogto ahaato oo aad cunto caafimaad leh.
1 Jimicsiyada ugu fiican ee lagu gubo kalooriyada
1.2 Baaskiil wadista
2 Sida looga baxo wax badan jimicsigaaga si miisaanku u yaraado
2.1 Xoog kale
2.2 Ka beddel tababarkaaga
2.3 Noqo mid joogto ah
2.4 Cun si waafaqsan
Jimicsiyada ugu fiican ee lagu gubo kalooriyada
Maxay yihiin laylisyada ugu fiican ee miisaanka lagu dhimo? Wax kasta oo dhaqdhaqaaqa ku lug leh ayaa wanaagsan. Haddii dhaqdhaqaaqaasi kuu oggolaado inaad gubto kalooriyo ka badan inta aad isticmaashid, miisaankaaga ayaa hoos u dhacaya. Macno malahan jimicsiyada ay yihiin. Sikastaba, waa kuwan fikrado u taagan waxtarkooda:
Orodku waa mid ka mid ah jimicsiyada miisaanka oo yaraada. Waa ikhtiyaar aad u fiican, laakiin ma aha kan kaliya, markaa haddii aad isku daydo oo aadan dhammeynin qamaarka, xusuusnow inay jiraan siyaabo kale oo aad ku gaari kartid yoolalkaaga miisaanka adigoo u maraya isboorti.
Baaskiiladu waa xulafadaada kahortagga isku duubnaanta dufanka, gaar ahaan haddii aad dalbatid tababbarka bareegyada (beddel tartiib tartiib tartiib ah oo leh qaybo xoog leh). Haddii aad u isticmaasho inaad ku dhex wareegto magaalada intii aad gaari kaxaysan lahayd, waxaad sidoo kale gacan ka geysan doontaa daryeelka deegaanka.
Dhammaan jimicsiyada miisaanka luminta, dabaasha waa mid ka mid ah kuwa ugu dhameystiran. Kaliya maahan inay gubto kalooriyada, waxay sidoo kale muruqyada jirka oo dhan ka dhigtaa oo waxay hagaajisaa caafimaadka guud. Dabaasha saddex jeer usbuucii waa bilow wanaagsan. Si looga dhigo waxtar badan, waa muhiim inaad isku daydo inaad naftaada horumariso kulan kasta. Si tan loo sameeyo, tilmaam magacyadaada.
Jimicsiyada jimicsiga ayaa ku siiya mashiinno kala duwan si loo gubo kalooriyada. Mashiinka doonta ayaa ah mid shaki la'aan, waa inaad tixgelisaa. Iyo, marka lagu daro inuu kaa caawiyo inaad miisaankaaga dhinto, iyada oo aad ku qeexi karto muruqyada labada qaybood ee sare iyo hoose.
Ma ogtahay taasi jaranjarooyinka fuulista wuxuu leeyahay faa iidooyin iyo faa'iidooyin badan? Midkood waa miisaan lumis, sidaa darteed waligaa ha seegin fursadda inaad wiishka uga degto oo aad lug ugu baxdo.
Layligani waa istiraatiijiyad gubasho dufan oo fudud oo wax ku ool ah. Ku habboon ku habboonaanta meelaha yaryar, Burpees waxaa loo tixgeliyaa inay tahay jimicsi aad u dhameystiran, maadaama ay u oggolaanayaan jirka oo dhan in la shaqeeyo. Waxay ka kooban yihiin riixitaan oo ay ku xigto boodbood. Waxay ku lug leedahay sameynta dhowr nooc oo 10 ku celcelin ah oo leh nasasho gaaban oo udhaxeysa mid kasta.
Sida looga baxo wax badan jimicsigaaga si miisaanku u yaraado
Haddii aad rabto inaad wax badan ka hesho tababarkaaga si aad miisaankiisa u lumiso hel natiijooyin fiican oo dhakhso leh, tilmaamaha soo socdaa waxay noqon karaan caawinaad weyn:
Ku beddel xooggaaga jimicsigaaga inta u dhexeysa dhexdhexaad iyo sare. Isbeddeladan waxaa lagu fulin karaa labadaba hal maalin iyo maalmo kala duwan.
Ka beddel tababarkaaga
Tixgeli tababarka iskutallaabta. Waa hab kulmiya jimicsiyo kaladuwan oo kaladuwan. Tababbarka iskutallaabtu wuxuu u shaqeeyaa kooxo muruqyo kala duwan, waana sababta ay u tahay jimicsi dhammaystiran. Ku celcelinta isla jimicsiga maalinba maalinta ka dambeysa waxay noqon kartaa caajis. Marka laga eego aragtidan, sharad ku saabsan iskutallaabtu waa fikrad wanaagsan sababo la xiriira kala duwanaanshaheeda.
Orod, Baaskiil wadista, iyo ka shaqaynta cilmiga elliptical waa qaar ka mid ah laylisyada ugu caansan marka ay timaado miisaanka oo hoos u dhaca. In kasta oo xaqiiqda ah in jimicsiga wadnaha uu gubto kalooriyo badan, miisaanka luminta waa isku-darka wadnaha iyo culeyska.
Noqo mid joogto ah
Si aad uga faa’iideysato jimicsiyada miisaanka oo yaraada waxaad u baahan tahay inaad joogto ahaato. Taasi waxay ka dhigan tahay aan ka yarayn 150 daqiiqo usbuucii, iyadoo 200 ama ka badan ay yihiin kuwa ugu habboon. Jadwalka jimicsigaaga ayaa kaa caawin doonta inaad halkaas gaarto.
Dhinaca kale, bilowga ah waxaa lagula talinayaa inay si tartiib tartiib ah u kordhiyaan waqtiga iyo heerka dadaalka. 50-60 daqiiqo usbuucii waa bilow wanaagsan. Doonista inaad dhaqso u socoto waxay kordhisaa halista tuurista tuwaalka, iyo sidoo kale dhaawaca.
Cun si waafaqsan
Arimaha miisaanka, cuntadu waxay muhiim u tahay jimicsiga. Jimicsiyada lagu dhimayo culeyska jirka waa inay la socotaa cunto joogto ah. Qaado caadooyinka cunida wanaagsan (kan Cuntada Biyaha waa ikhtiyaar aad u fiican) oo aad dayactiri karto mustaqbalka fog waa lama huraan inaad lumiso miisaanka oo aad mar kale iska dhigto.
Qaybaha ka hoos ilaali si aysan u tuurin dhammaan howlaha lagu qabtay qolka jimicsiga.
Haddii aad haysato cunto aad ugu jeceshahay, sida pizza ama jalaato, uma baahnid inaad iska daysid. Tixgeli inaad beegsato cuntada kalooriga ee aad ugu jeceshahay abaalmarin toddobaadle ah.
Ugu dambeyntii isku day inaad yareyso tirada kalooriyada. Haddii aad isticmaasho kaloriin yar maalintii oo dhan (oo ay ku jiraan kuwa khamriga ka yimaadda), jimicsiyadaada miisaankaaga oo yaraada ayaa bixin doona natiijooyin dhakhso leh.
Xaqiiqda qallafsan ayaa ah in caloosha aysan ku soo ceshanayn xaaladdeedii caadiga ahayd xawaare la mid ah kii ay ku barareyso. Miisaanka oo aad u lumiso si caafimaad qab ah oo waarta ayaa u baahan waqti, sidaa darteed u sabir. Duubista horumarkaaga qolka jimicsiga ama miisaanka (haba yaraadee) waxay kaa caawin doontaa inaad dhiirrigeliso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Jimicsiyo miisaan lumis ah
ciise menjivar dijo
Maqaal aad u fiican! Salaan.
Jawaab ciise menjivar
Jawaab Miguel Serrano
Waxay ku egtahay ceelasha